Abakhiqizi bezindwangu zehembe lendwangu 4-way-stretch-bleach umshayeli wendwangu nabaphakeli | I-Yun Ai
Ulapha: ekhaya - Imikhiqizo - Indwangu yehembe le-4-way-stretch-bleach umshayeli wehembe
Le ndwangu yenzelwe enye yezinkampani ezinkulu ze-airway eCanada, ezenziwe nge-polyester engu-68%, i-viscose engama-28% ne-4% spandex, ewusizo kakhulu kumfaniswano wehembe lomshayeli.
Ukufanekisa isithombe somshayeli, ihembe kufanele lisikwe futhi li-ayinwe kahle ngaso sonke isikhathi, ngakho-ke sithatha i-polyester fiber njengezinto ezingavuthiwe kakhulu, futhi isebenza kahle ekususeni umswakama, okugcina umshayeli epholile ngesikhathi somsebenzi, futhi sikwenzile okunye ukwelashwa okulwa nokukhishwa ngaphezu kwendwangu. Ngasikhathi sinye, ukuze silinganise ukuzizwa nokuthamba, sibeka i-viscose ne-spandex fiber, cishe i-30% yempahla eluhlaza, ngakho-ke indwangu ine-handfeeling ethambile kakhulu, qinisekisa ukuthi umshayeli ugqoka ngokunethezeka.
Ukwakheka: I-68% T / 28% Viscose / 4% SP
Into Cha: YA3047
Ukubala kwentambo: 50/2 * 50/2 + 40D
Futhi uma unamasampula akho, siphinde sisekele ukukhiqizwa kwe-OEM, ngokuxhumana okuqhubekayo ngamasampuli athile, sizokunikeza imiphumela egculisayo kakhulu nokuqinisekiswa kokugcina kwama-oda. Hhayi indwangu yomfaniswano womshayeli kuphela, kepha nezindwangu zomfaniswano wesikole, indwangu yesudi yehhovisi kanye nendwangu yomfaniswano we-horeca, ungabheka i-catrgory yethu ngenhla, nganoma yimiphi imibuzo, sicela uxhumane nathi.